Umaki: Izikhangiso ze-Instagram | Martech Zone
Umaki: Izikhangiso ze-Instagram
I-Crello: Isihleli se-Pay-As-You-Go Graphics esinezinkulungwane zezifanekiso ezinhle
NgoMsombuluko, Septemba 7, 2020 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 9, i-2021 Douglas Karr
Singabalandeli abakhulu beDepositphotos, isithombe sesitoko esingabizi, ingcaca, nesisombululo sevidiyo. Kungakho sibafake ohlwini lwabaxhasi futhi siqhubeka nokukhuthaza insiza yabo kusayithi lethu namakhasimende ethu. Vele, nathi sinxusa. Ithimba elisekele iDepositphotos manje selethule uCrello, isihleli sokubuka samahhala esinikwe izigidi zezifanekiso ezinhle. Okukhumbuza i-Canva (ngaphandle kwesidingo sokubhalisa), uCrello unikela ngezithombe zamahhala ezingaphezu kwe-10,500, kufaka phakathi izithombe,